Ignitor Insulator China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ignitor Insulator - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Ignitor Insulator)
I-Glazed Ceramic Insulator Body for Igniter I-Ceramic insulator body for izinhlobo eziningi zokushisa. ezifana nabapheki begesi, nama-heaters njll. Kuhlale kusetshenziselwa ukushisa kwe-ceramic. Izici: 1. Amandla kagesi aqhekekile 2.I-Ceramic ne- surface ebushelelezi ebanzi 3. Ukumelana nokuzikhukhula nokukhukhula...
Ukuhlanzeka okukhulu kwe-ceramic insulator tube
Le tube ye-ceramic insulator yenziwe nge-aluminium oxide ceramics ngo-99.5%. Ukuze uhlangabezane nesicelo esikhethekile, le ndawo yangaphakathi kufanele iphotshwe. Njengoba u-99.5% we-alumina anezindawo ezinkulu ze-dielectric, ukumelana okuhle kwamakhemikhali nokubhujiswa, nokusebenza kagesi okuzinzile ngaphansi...